Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Mahatsapa ny olana atrehinareo tanora aho” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “Mahatsapa ny olana atrehinareo tanora aho”
Manerana izao tontolo izao dia mitodika amin’ny tanora ny fiarahamonina, ary ny vondrona afrikana dia nametraka mihitsy ireo vondron’olona ireo ho laharam-pahamehana. Ho an’i Madagasikara, dia nametraka ny tanora ho ivon’ny fisandratan’ny vina ara-toekarena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. « Tsy atao ankilabao ianareo fa raisina ho mpiara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ny fisandratana » hoy ny fanazavan’ny Filoha. Niaiky ny Filoha fa manana andraikitra amin’izany koa ny fanjakana tsy mahatanteraka ny adidiny. Niantso ny tanora malagasy izy araka izany hitazona ny kolontsaina mampiavaka ny Malagasy, fa tsy haka tahaka foana ny any ivelany. « Efa niroso tamin’ny fitsinjovana anareo ny fanjakana, ary hanohy izany araka izay tratra. Aza manaiky atao fitaovana politika intsony ianareo », hoy ihany izy.
Voatsidiky ny filoha tamin’ny fotoam-bita omaly avokoa ireo sehatra mahakasika ny tanora, na ny eto an-drenivohitra na ireo any ambanivohitra. « Mahatsapa ny zava-misy atrehinareo aho, mahatsapa ny ahiahy sy ny tebiteby iainanareo eo anivon’ny fiarahamonina, na noho ny tsy fahampian’ny asa vokatry ny rafitra ara-toe-karena nisy hatramin’izay, na noho ny fahasahiranan’ny Ray aman-dreny tsy afaka mitaiza sy manara-maso ny fanabeazana araka ny tokony ho izy intsony ny ankamaroany », araka ny fanazavana nentin’ny filoham-pirenena hatrany. Tsy mahagaga araka izany raha betsaka ireo tanora no mandeha mifindra monina mba hitady fiainana tsaratsara kokoa, ka miezaka mihazo ireo firenena heverina ho mandroso. « Zava-doza anefa ny mety ahazo azy ireo eny an-dalam-pifindra-monina eny, iharan’ny herisetra na ho tra-doza toa ny eny an-dranomasina. Sarihin’ireo mpanam-bola ireo tanora ka mirongatra ny asan-jiolahy maneran-tany », hoy ihany ny fanamarihan’ny Filoha. Maro amin’ireo tanora noho izany no lasa manaotao foana, ary ohatra nomen’ny filoha ny fandroahana mpianatra teny amin’ny lisea noho ny resaka hypnotisme, ny fisian’ireo zaza tsy ampy taona mandray anjara amin’ny asan-jolahy sy ny asan-dahalo, ireo tanora miteraka aloha loatra… Maro amin’ireo tanora noho izany no lasa enta-mavesatra ho an’ny fiarahamonina raha tokony hery hampivoatra sy hanatsara ny fiainam-pirenena izy ireny.
Mahatsapa ny fitondrana fa anisan’ny endrika iray hitsonjovana ny tanora, ary hametrahana azy ireo ho fanoitran’ny fampandrosoana ny fampandraisana andraikitra azy ireo. Ao anatin’izany ny tontolon’ny asa. « Misy ny asa saingy mbola tsy maharaka izany, ka hanentanana ireo mpampiasa vola », hoy hatrany ny Filoha. Hisy ihany koa ny fanampiana ireo tanora amin’ny fananganana orinasa, ny fanaovana fifaninanana famoronana tetikasam-pihariana…
Ao anatin’izany koa ireo tanora any ambanivohitra izay mandrafitra ny ¾ ny tanora. Tanora tantsaha manodidina ny 1 alina no nahazo fiofanana niaraka tamin’ireo mpamatsy vola.
Etsy ankilan’izany ireo sehatra hafa dia ny fanampiana ireo taranja rehetra amin’ny fanatanjahantena sy ny fametrahana teoram-piofanana. Ohatra amin’izany ny sekoly fanofanana ho an’ny baolina lavalava eny Andohatapenaka, izay ezahna aparitaka any amin’ny faritra hafa. Efa misy ny fametrahana ireo fotodrafitrasa samihafa ho an’ny tanora sy ny mpianatra toa ny tranoben’ny tanora, ireo tranomboky ary ny fanapariahana ireo fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao toa ny « fitaratra nomerika ». Ireo rehetra ireo dia efa tafiditra ao anatin’ilay politikam-panjakana ho an’ny tanora, izay efa nampiharina nanomboka tamin’ny 2017. « Raha 90% no famatsiam-bola no nandrasana tamin’ny mpiara-miombon’antoka mamatsy vola dia voam-panjakana madiodio amin’izao fotoana ny 60% amin’ny fampiharana azy », hoy ny fanazavan’ny Filoha. Mahazo tombontsoa amin’izao avokoa ireo tanora amin’io politika tsy manavaka io.
Fa zava-dehibe nambaran’ny Filoha amin’ny fiatrehana ny ho avin’ny tanora ihany koa ny tontolon’ny fampianarana. Ao anatin’izany ny fampiharana ny politikam-pampianarana vaovao (PSE), ka hampidirana an-tsekoly avokoa ireo zaza malagasy, ary tsy hiala an-tenantenany, ary arahina fanofanana arak’asa. Toa izany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eny amin’ny ambaratonga ambony.